၂၀၁၈-၁၉ ပရီးမီးယားလိဂ်အကောင်းဆုံးအသင်းထွက်ပေါ်လာ – Myan Ball
Posted on May 15, 2019 by thuya
ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီ ပိတ်ကားကြီးဟာ ပြီးပုံကားချခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ပျက်မှုမရှိစေခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါအကောင်းဆုံးအသင်းကို ၄-၃-၃ ကစားကွက်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး အရန်ခုံကစားသမားများအတွက်လည်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးသမား – လီနို (အာဆင်နယ်)
လီနိုသည် အင်္ဂလန်တွင်ပထမဆုံးပွဲထွက်ကစားရပေမယ့်လည်း ဂန်းနားတို့အတွက်ယခုနှစ်တွင်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ညာနောက်ခံလူ – ထရန့်အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး (လီဗာပူး)
ဒီကောင်လေးရဲ့ အရည်အသွေးဟာ အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းပါတယ်။ သူ့အသက် ၂၀ အရွယ်နဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို အထင်ကြီး လေးစားမှုရရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ သူ့ညဏ်ရည်ညဏ်သွေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့ ကစားနိုင်ခြင်းကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ၁၂ ဂိုးအထိ ဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဗဟိုနောက်ခံလူ – ဗန်ဒိုက်(လီဗာပူး)
မကြာသေးခင်က PFA တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ နောက်ခံကစားသမားဟာ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေခဲ့သလား? လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ယခုနှစ်ရာသီ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် အဆိုပါဒက်ခ်ျကစားသမားရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗဟိုနောက်ခံလူ – အမ်မရစ်လာပေါ်တေး (မန်စီးတီး)
ယခုနှစ်မှ မန်စီးတီးအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသော အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ကစားသမား လာပေါ်တေးသည် မန်စီးတီးရဲ့ ခံစစ်တွင် ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်များကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အဓိကအကျဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ၆ လကို အိပ်ရာတွင် ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့လာပေါ်တေးသည် စီးတီးမြို့သူမြို့သားတို့အတွက် ခံစစ်တွင် အားထားရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နောက်ခံလူ – အန်ဒီရော်ဘတ်ဆန် (လီဗာပူး)
ကောင်းမွန်တဲ့နောက်ခံလူဖြစ်သော စကော့တလန်ကပ္ပတိန်သည် ပရီးမီးယားလိဂ်တွင်ခံစစ်တစ်ယောက်အတွက် စံချိန်တင် ဂိုးဖန်တီးမှုကို ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးကြိုးကြိုးစားစား ကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားမျိုးကို အင်္ဂလိပ်အသင်းကြီးတွေထဲမှာ ရှာဖို့ ခက်ခဲနေမှာပါ။
ကွင်းလယ်လူ – ရူဘင်နီဗက်စ် (၀ုဗ်)
သူဟာ အသက် ၂၁ နှစ်ပဲရှိတာကို လွယ်ကူစွာနဲ့မေ့ပစ်လို့ရပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သက်တမ်းရင့်ကစားသမားတစ်ယောက် လိုဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့အသက်အရွယ်ကို ခြွင်းချက်ထားပြီး ၀ုဗ်ကွင်းလယ်မှာ သူရှိနေခြင်းက အဓိက ကျနေခဲ့ပါတယ်။
ကွင်းလယ်လူ – ဘာနာဒိုလ်ဆေးလ်ဗား (မန်စီးတီး)
သံသယရှိစရာမလိုတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ့မှာ အသက်ရှုမှားလောက်တဲ့ ပေးပို့မှုတွေ ရှိပေမယ့် ရိုးရှင်ပါတယ် ။ သူဟာ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းလယ်လူ – ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင် (လက်စတာ)
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး အောင်မြင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဖြတ်တင်ဘောတွေဟာ သေလောက်အောင်ကောင်းမွန်ပြီး လက်စတာကွင်းလယ်မှာ အဓိကမောင်းနှင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို အသက် ၂၁ နှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပေမယ့် ၇ ဂိုးသွင်းယူထားပြီး ၇ ဂိုးဖန်တီးထားသူဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး – ဆာလာ (လီဗာပူး)
သူဟာ မာဆေးဆိုဒ်အတွက် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီတွင်၂၁ ဂိုးသွင်းယူထားပြီး ၈ ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အီဂျစ်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး – အဂူရို (မန်စီးတီး)
နှစ်တွေကုန်လွန်သွားပေမယ့် အဂူရိုဟာ ကျဆင်းတဲ့ အရိပ်အယောင်မပြသေးပါဘူး။ သူဟာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းရာသီဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ၂၀၁၅/၁၆ ဘောလုံးရာသီက ခြေစွမ်းမျိုး ပြန်လည်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စီးတီးအသင်းက လိုအပ်ချိန်တိုင်း သူဟာ ရှိနေဆဲလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး – စတာလင်း (မန်စီးတီး)
ဆက်လက်တိုးတက်နေသော ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် နောက်ထပ်အောင်မြင်တဲ့ ရာသီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးတွေ၊ ဖန်တီးမှုတွေ ၂ ဆ တိုးတက်လာပြီး အံ့သြဖွယ်ရာ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အရန်ကစားသမားများ ကတော့ (အလီဆန်၊ အန်ဒါဝှီးလ်၊ ဒစ်နေး၊ ကာပိုယူ၊ ရိုက်စ်၊ ဟာဇက်၊ မာနေး) တို့ကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂျရာသီ ပိတျကားကွီးဟာ ပွီးပုံကားခခြဲ့ပွီး အကောငျးဆုံးကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျဟာ ကြှနျတျောတို့ကို စိတျပကျြမှုမရှိစခေဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါအကောငျးဆုံးအသငျးကို ၄-၃-၃ ကစားကှကျနဲ့ ဖျောပွခဲ့ပွီး အရနျခုံကစားသမားမြားအတှကျလညျး ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။
ဂိုးသမား – လီနို (အာဆငျနယျ)
လီနိုသညျ အင်ျဂလနျတှငျပထမဆုံးပှဲထှကျကစားရပမေယျ့လညျး ဂနျးနားတို့အတှကျ ယခုနှဈတှငျကွယျပှငျ့ကစားသမားတဈယောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ညာနောကျခံလူ – ထရနျ့အလကျဇနျးဒါးအာနိုး (လီဗာပူး)
ဒီကောငျလေးရဲ့ အရညျအသှေးဟာ အံ့သွဖှယျရာကောငျးပါတယျ။ သူ့အသကျ ၂၀ အရှယျနဲ့ တဈယောကျယောကျကို အထငျကွီးလေးစားမှုရရှိအောငျ ပွုလုပျနိုငျခွငျး၊ သူ့ညဏျရညျညဏျသှေးနဲ့ တညျငွိမျအေးဆေးစှာနဲ့ ကစားနိုငျခွငျးကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တဈယောကျတညျး ၁၂ ဂိုးအထိ ဂိုးဖနျတီးမှုပွုလုပျထားနိုငျပါတယျ။
ဗဟိုနောကျခံလူ – ဗနျဒိုကျ(လီဗာပူး)
မကွာသေးခငျက PFA တဈနှဈတာအကောငျးဆုံး ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ နောကျခံကစားသမားဟာ ကွီးမားတဲ့ပွောငျးလဲမှုကို ဖွဈစခေဲ့သလား? လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ယခုနှဈရာသီ စှမျးဆောငျရညျတှငျ အဆိုပါဒကျချြကစားသမားရဲ့ လှမျးမိုးမှုတှလေညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဗဟိုနောကျခံလူ – အမျမရဈလာပျေါတေး (မနျစီးတီး)
ယခုနှဈမှ မနျစီးတီးအသငျးသို့ ပွောငျးရှလေ့ာသော အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျကစားသမား လာပျေါတေးသညျ မနျစီးတီးရဲ့ ခံစဈတှငျ ပွိုငျဘကျတိုကျစဈမြားကို ရငျဆိုငျရာတှငျ အဓိကအကဆြုံးကစားသမားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ပထမ ၆ လကို အိပျရာတှငျ ကုနျဆုံးခဲ့တဲ့လာပျေါတေးသညျ စီးတီးမွို့သူမွို့သားတို့အတှကျ ခံစဈတှငျ အားထားရသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
ဘယျနောကျခံလူ – အနျဒီရျောဘတျဆနျ (လီဗာပူး)
ကောငျးမှနျတဲ့နောကျခံလူဖွဈသော စကော့တလနျကပ်ပတိနျသညျ ပရီးမီးယားလိဂျတှငျခံစဈတဈယောကျအတှကျ စံခြိနျတငျ ဂိုးဖနျတီးမှုကို ပွုလုပျထားနိုငျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျတို့အနနေဲ့ ဒီလိုမြိုးကွိုးကွိုးစားစား ကစားတတျတဲ့ ကစားသမားမြိုးကို အင်ျဂလိပျအသငျးကွီးတှထေဲမှာ ရှာဖို့ ခကျခဲနမှောပါ။
ကှငျးလယျလူ – ရူဘငျနီဗကျဈ (ဝုဗျ)
သူဟာ အသကျ ၂၁ နှဈပဲရှိတာကို လှယျကူစှာနဲ့မပေ့ဈလို့ရပွီး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ သကျတမျးရငျ့ကစားသမားတဈယောကျလိုဖွဈနပေါတယျ။ သူ့အသကျအရှယျကို ခွှငျးခကျြထားပွီး ဝုဗျကှငျးလယျမှာ သူရှိနခွေငျးက အဓိက ကနြခေဲ့ပါတယျ။
ကှငျးလယျလူ – ဘာနာဒိုလျဆေးလျဗား (မနျစီးတီး)
သံသယရှိစရာမလိုတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့အကောငျးဆုံးကှငျးလယျလူတဈယောကျပါပဲ။ သူ့မှာ အသကျရှုမှားလောကျတဲ့ ပေးပို့မှုတှရှေိပမေယျ့ ရိုးရှငျပါတယျ ။ သူဟာ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ ဥယြာဉျထဲမှာ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ရသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
ကှငျးလယျလူ – ဂြိမျးဈမကျဒီဆငျ (လကျစတာ)
အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျကစားသမားဟာ ဆကျလကျတိုးတကျနပွေီး အောငျမွငျနသေူဖွဈပါတယျ။ သူ့ဖွတျတငျဘောတှဟော သလေောကျအောငျကောငျးမှနျပွီး လကျစတာကှငျးလယျမှာ အဓိကမောငျးနှငျနတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျကို အသကျ ၂၁ နှဈမှာ စတငျခဲ့ပမေယျ့ ၇ ဂိုးသှငျးယူထားပွီး ၇ ဂိုးဖနျတီးထားသူဖွဈပါတယျ။
တိုကျစဈမှူး – ဆာလာ (လီဗာပူး)
သူဟာ မာဆေးဆိုဒျအတှကျ ယခုနှဈဘောလုံးရာသီတှငျ၂၁ ဂိုးသှငျးယူထားပွီး ၈ ဂိုးဖနျတီးပေးခဲ့ပါတယျ။
တိုကျစဈမှူး – အဂူရို (မနျစီးတီး)
နှဈတှကေုနျလှနျသှားပမေယျ့ အဂူရိုဟာ ကဆြငျးတဲ့ အရိပျအယောငျမပွသေးပါဘူး။ သူဟာ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးဂိုးသှငျးရာသီဖွဈခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ၂၀၁၅/၁၆ ဘောလုံးရာသီက ခွစှေမျးမြိုး ပွနျလညျရရှိအောငျ စှမျးဆောငျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ စီးတီးအသငျးက လိုအပျခြိနျတိုငျး သူဟာ ရှိနဆေဲလူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
တိုကျစဈမှူး – စတာလငျး (မနျစီးတီး)
ဆကျလကျတိုးတကျနသေော ကစားသမားတဈယောကျအတှကျ နောကျထပျအောငျမွငျတဲ့ ရာသီတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဂိုးတှေ၊ ဖနျတီးမှုတှေ ၂ ဆ တိုးတကျလာပွီး အံ့သွဖှယျရာ နှဈတဈနှဈဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အရနျကစားသမားမြား ကတော့ (အလီဆနျ၊ အနျဒါဝှီးလျ၊ ဒဈနေး၊ ကာပိုယူ၊ ရိုကျဈ၊ ဟာဇကျ၊ မာနေး) တို့ကို ရှေးခယျြထားပါတယျ။